Title: Myanmar Retailers Assocation Third Seminar @ UMFCCI Part 4
မြန်မာနိုင်ငံလက်လီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ တတိယအကြိမ်မြောက် လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ
Title: Myanmar Retailers Assocation Third Seminar @ UMFCCI Part 3
Title: Myanmar Retailers Assocation Third Seminar @ UMFCCI Part 2
Title: Myanmar Retailers Assocation Third Seminar @ UMFCCI Part 1
Title: Myanmar Retailers Assocation Second Seminar @ UMFCCI Part 3
မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်းမှ "ထိရောက်သော လက်လီလုပ်ငန်းတစ်ခုမည်သို့ဆောင်ရွက်မည်" အမည်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် (စနေနေ့)တွင် UMFCCI ပထမထပ်၌ နေ့လည် ၁၂: ၃၀ မှ ၄:၁၅ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးထွန်းသူရသက် ၊ Mr Tankar Chin ၊ ဦးဇော်လတ် တို့ မှ လက်လီလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ခေါင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်
Title: Myanmar Retailers Assocation Second Seminar @ UMFCCI Part 2
မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်းမှ "ထိရောက်သော လက်လီလုပ်ငန်းတစ်ခုမည်သို့ဆောင်ရွက်မည်" အမည်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် (စနေနေ့)တွင် UMFCCI ပထမထပ်၌ နေ့လည် ၁၂: ၃၀ မှ ၄:၁၅ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးထွန်းသူရသက် ၊ Mr Tankar Chin ၊ ဦးဇော်လတ် တို့ မှ လက်လီလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ခေါင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Title: Myanmar Retailers Assocation Second Seminar @ UMFCCI Part 1
Title: Myanmar Retailers Assocation First Seminar @ UMFCCI Part 3
South East Asia Retail & Shopper Trends - Mr Karl Cotaoco မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း(ယာယီ)မှ "လက်လီလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်" အမည်ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် (စနေနေ့)တွင် UMFCCI ပထမထပ်၌ နေ့လည် ၁၂: ၃၀ မှ ၄:၁၀ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း(ဒု)ဥက္ကဋ္ဌ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းအောင် မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး MMRD မှ ဦးသူရိန်ငြိမ်း၊ City Mart မှ ဦးစိုးမိုးသူ နှင့် Unliever မှMr. Kart Cotacco , တို့ မှ လက်လီလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ခေါင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Title: Myanmar Retailers Assocation First Seminar @ UMFCCI Part 2
Current and Future Myanmar Retail Outlook - U Soe Moe Thu မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း(ယာယီ)မှ "လက်လီလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်" အမည်ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် (စနေနေ့)တွင် UMFCCI ပထမထပ်၌ နေ့လည် ၁၂: ၃၀ မှ ၄:၁၀ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း(ဒု)ဥက္ကဋ္ဌ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းအောင် မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး MMRD မှ ဦးသူရိန်ငြိမ်း၊ City Mart မှ ဦးစိုးမိုးသူ နှင့် Unliever မှMr. Kart Cotacco , တို့ မှ လက်လီလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ခေါင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Title: Myanmar Retailers Assocation First Seminar @ UMFCCI Part 1
Myanmar Country Profile & Retail Statistics - U Thurein Nyein မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း(ယာယီ)မှ "လက်လီလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်" အမည်ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် (စနေနေ့)တွင် UMFCCI ပထမထပ်၌ နေ့လည် ၁၂: ၃၀ မှ ၄:၁၀ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း(ဒု)ဥက္ကဋ္ဌ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းအောင် မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး MMRD မှ ဦးသူရိန်ငြိမ်း၊ City Mart မှ ဦးစိုးမိုးသူ နှင့် Unliever မှMr. Kart Cotacco , တို့ မှ လက်လီလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ခေါင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Title: Press Release for MMRA Seminar on 12 June 2013 - Q&A Section 2
In this video, explaining about how is MMRA going to expand the network of organization through global.
Title: Press Release for MMRA Seminar on 12 June 2013 - Q&A Section 1
This video explains about the duty and function of five-committee and President of MMRA invited the retailer to beamember no matter how small or big business they have.
Title: Press Release for MMRA Seminar on 12 June 2013
U Myo Min Aung (Communication & Public Affair Committee)
This video explained about the MMRA Main Objectives, Purpose and Member Benefits.
Daw Wai Thit Lwin (Education Committee)
Briefly explained about how the convenience store in local is running by comparing traditional and modern way and explain more about the future plan of Education Committee.